Nhau - Chii chinonzi Zirconia Block?
Sezvo isu tese tichiziva kuti pane matatu marudzi echinhu anoshandiswa ekugadzirisa mazino: zirconia block zvinhu uye simbi zvinhu. Zirconium oxide inoitika seye monoclinic, tetragonal uye cubic crystal mafomu. Zvidimbu sintered zvikamu zvinogona kugadzirwa se cubic uye / kana tetragonal crystal mafomu. Kuti ugadzikane zvivakwa zvekristaro, zvinodzikamisa senge magnesium oxide (MgO) kana yttrium oxide (Y2O3) inoda kuwedzerwa kuZrO2.
Nei zirconia block chiri chakanyanya kukodzera chigadzirwa mune mazino kudzoreredzwa?
Ngatitaurei fomu fomu zirconia. Iyo yemazino zirconia block inogadzirwa nekristalline oxide fomu ye zirconium, uye inoumbwa nesimbi yesimbi mukristaro asi haina kumbofungidzirwa simbi. Nekuda kwekugara kwayo uye biocompatible zvivakwa, vanovhiya kana vanachiremba vanoshandisa mazino zirconia block mune akasiyana eprostheses. Kunyangwe iyo inoshandiswa mukudyara sezvo ichionekwa seyakasimba kwazvo zvinhu.
Kunyangwe hazvo zvigadzirwa zvakawanda zvichishandiswa mumazino indasitiri, iyo yemazino zirconia block inonziwo ceramic block inonyanya kuzivikanwa pakati pechiremba wemazino nevarwere.
Zvimwe zvakanaka zvemazino zirconia anovhara:
- Sezvo ichigadzirwa uchishandisa iyo yepamusoro-tech kuvandudza. Nekwakasimba kutsemuka kuomarara, kupisa kwekushisa kwakada kufanana nesimbi yakakoswa, kwakanyanya kukotama simba uye kusimba kwesimba, kukwirira kuramba kupfeka uye kuita ngura, kwakadzika kupisa kupisa
- Zvakare, zvinogamuchirwa nemasangano emunyika. Zvakare, zvidhinha izvi zvakamboedzwa kumwe kuchena, kuve nechokwadi kuti zvakachengeteka kushandisa.
-Dental zirconia block ndeye chigadzirwa chemhando yepamusoro, uye zvakare chinoita kuti zino riwedzere kusimba uye rakasikwa.
-Kana chigadzirwa chikaiswa mukati memurwere, chinopa hupenyu hwakanaka pasherufu.
-Iyo mimwe mibairo yakakosha yeiyi yemazino zirconia block ndeye iyo ichaderedza pre-kuomesa nguva uye kugadzirisa iyo inoonekwa yekuona panguva yekudhaya nguva.
-Iyo inonyanya kukosha maficha echichi chigadzirwa ndeyekuti inogona kuve nechero yakasarudzika ruvara rwekutaridzika, uye zvakare inogona kuenderana chero saizi uye chimiro.
Post nguva: Jul-17-2021